BGR - -7စက်တင်ဘာလ 11 အပေါ်အခမဲ့ရောင်းသည် iPhone app များကိုပေးဆောင် Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပေးအယူ BGR - "7 စက်တင်ဘာလ 11 အပေါ်အခမဲ့ရောင်းသည် iPhone app များကိုပေးဆောင်
BGR -7စက်တင်ဘာလ 11 အပေါ်အခမဲ့ရောင်းသည် iPhone app များကိုပေးဆောင်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကျနော်တို့ကအကောင်းဆုံးကန့်သတ်အချိန်များအတွက်အခမဲ့ရောင်း paid ဖြစ်ကြောင်း iPhone နဲ့ iPad applications များအပေါ်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း၏စိတ်ကူးပတ်ပတ်လည်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုတွေ့ရှိရန်ရောင်းအားရာပေါင်းများစွာမှတဆင့်ကြည့်ရှုခဲ့ကြရသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာဖတ်သူများတန်ဖိုးထားလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ခုနစျပါးအသစ်များကို applications များအလုံအလောက်မဟုတျပါလျှင်တစ်ဦးလည်းရှိသေး၏ အဆိုပါဝင်ရောက်စီးနင်းအတွက်အနည်းငယ်ကျန်ရှိနေသောလက်ဆောင်တွေမနေ့က အမှု၌သင်တို့ကိုလွဲချော်ချင်ပါတယ်။
ဤဆောင်းပါးဖန်တီးခဲ့ကြကြောင်း iPhone နှင့် iPad များအတွက်ပေးဆောင် apps များဖုံးလွှမ်း။ ၎င်းတို့၏ developer များကန့်အသတ်အချိန်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါ။ BGR မဆိုလျှောက်လွှာပြုစုသူနှင့်အတူဆက်နွယ်ခြင်းမရှိပါ။ သူတို့အခမဲ့ဖွစျလိမျ့မညျကိုဘယ်လိုရှည်လျားပြောပြရန်လမ်းမရှိ။ ထိုသို့သောရောင်းအားတစ်နာရီသို့မဟုတ်တစ်ပါတ်ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကျနော်တို့အာမခံနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာတို့သည်ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားခြင်း၏အချိန်မှာအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ သင်တစ်ဦး link ကို click နှိပ်ပြီးအစားကမရှိတော့အခမဲ့ "ရ" ၏နောက်လာမည့် app တစ်ခုမှဖော်ပြထားသောစျေးနှုန်းကိုကြည့်ပါလျှင်။ အဆိုပါရောင်းချမှုပြီးစီးခဲ့သည်။ သငျသညျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လျှောက်လွှာကို download လုပ်ပါက, Apple ကသငျသညျကိုအားသွင်းပါလိမ့်မယ်။ တချို့က applications များထပ်တိုး In-app ကိုဝယ်ယူမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ RSS feed မှ Subscribe သို့မဟုတ်အသုံးပြုရန် e-mail ကိုတပ်လှန့်ကို ဤအပို့စ်များကိုဖန်ဆင်းသောအခါအသိပေးကျနော်တို့ကိုဖုံးလွှမ်းပျောက်ဆုံးရောင်းအားကိုရှောင်ကြဉ်ရမည်။
ပုံမှန်စျေးနှုန်း: € 0,99
နေအိမ်ဒီဇိုင်း Ultimate ၏လျှောက်လွှာ
သင်ကအမှန်တကယ်အသက်တာ၌တူမယ်လို့အဘယ်အရာကိုမသိရပါဘူးဘယ်မှာသူတွေကိုခြေဆွံ့ 2D applications များငြီးငွေ့?
ယနေ့ဒီ app ကို Download လုပ်ပါ! သင်သည်သင်၏အိပ်မက်၏အိမျလိုခငျြတဲ့ 3D ဖွဲ့စည်းပုံမှာ Create!
ကမ္ဘာမြေ Minecraft များအတွက် Download
ပြက္ခဒိန် Widget Pro ကိုတပတ်
ထိုကဲ့သို့သောတည်နေရာ, သင်တန်းသားများ, မှတ်စုများနှင့် widget ကပိုအဖြစ်ပြက္ခဒိန်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏အသေးစိတျကိုရယူပါ။ သင့်ရဲ့အနာဂတ်သို့မဟုတ်အတိတ်အစည်းအဝေးများတွေ့မြင်ရန်သင့်ဒိုင်ယာရီထဲမှာသော့ဖွင့်သင့်ရဲ့စက်ကိရိယာနှင့်အညွှန်းလျစ်လျူရှုပါ။
ပြသနိုင်ဖို့ကိုရွေးချယ်ပါ / ရက်သတ္တပတ်၏မည်သည့်နေ့ကဖုံးကွယ်
သင်လိုချင်တာတွေကျွန်တော်တို့ကိုပေးပို့ကျေးဇူးတင်ပါသည် ကျနော်တို့က add မယ်!
ပြက္ခဒိန်ရက်သတ္တပတ် Widget Pro ကို Download လုပ်ပါ
ဖုန်းနံပါတ်: drive ကိုဖိုင်သိုလှောင်မှုထပ်တူ
သငျသညျယခုသင့် iOS device ကို USB ကြိုးမဲ့အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကို - ဖုန်း Drive ကိုမိတ်ဆက်ခြင်း
ဖုန်းနံပါတ် Drive ကိုသငျသညျ, သိုလှောင်အမြင်နှင့်သင့် iPhone, iPad မှဒေသခံဖိုင်တွေသို့မဟုတ်မိုဃ်းတိမ်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ သငျသညျ Wi-Fi ကွန်ရက်ကနေတဆင့်မဆို, Mac သို့မဟုတ် PC ကနေဖုန်း Drive ကို ချိတ်ဆက်. နှင့်ဆွဲခြင်းနှင့် Finder ကိုသို့မဟုတ် Windows Explorer ကိုမှတိုက်ရိုက်ကျဆင်းနေခြင်းဖြင့်ဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။
သငျသညျယခု upload လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောလျှောက်လွှာ၌သင်တို့၏ discs တွေကိုစီမံခန့်ခွဲ download, အမြင်နှင့်တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုသို့မဟုတ်ဂီတကိုနားထောင်ဖို့မျိုးစုံမိုဃ်းတိမ်ကိုအကောင့်ကိုချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းနံပါတ် Drive ကိုတစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းကြည့်ရှုသူတစ်ဦး PDF ကိုကြည့်ရှုသူတစ်ဦးဂီတကစားသမားတစ်ဦးပုံရိပ်ကိုစာဖတ်သူ, အသံအသံဖမ်း, စာသားအယ်ဒီတာ, ဖိုင်မန်နေဂျာတို့ပါဝင်သည်ဆုံးနဲ့ file ကိုစစ်ဆင်ရေးထောက်ခံပါတယ်။ : လိုပဲ, delete ရွှေ့, မိတ္တူ, အီးမေးလ်ပေးပို့, ရှယ်ယာ, ချုံ့, decompress, အပန်းဖြေ, etc
*** KEY ကိုအင်္ဂါရပ်များ ***
Dropbox ကို, Google Drive ကို, OneDrive, သိုလှောင်ရေး Accounts ကို iCloud Drive ကို, Box, Yandex Disk ကိုမှမျိုးစုံ link ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
- PDF ကိုအစီရင်ခံစာဖတ်သူ:
စာညှပ်များနှင့် bookmark ကို features တွေနှင့်အတူအစာရှောင်ခြင်းတွင် PDF reader ထောက်ပံ့ပေးသည်။
] multitasking နှင့် cloud သိုလှောင်မှုထဲကနေဗီဒီယိုများနှင့်ဂီတ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ကနေသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသံသီချင်းစာရင်းကိုထပ်, ရောသမမွှေ, နောက်ခံပြန်ဖွင့်ခြင်းနှင့်ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုကိုဖန်တီးရန်တစ်ဦးကဖြစ်နိုင်ချေ။
- DOCUMENT အစီရင်ခံစာဖတ်သူ:
က MS Office ကိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်, iWork, စာသားနဲ့ HTML
- သည် HTTP / FTP ကိုစကားဝှက်ဖြင့်ကာကွယ်ထား:
စကားဝှက်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်အတူ PC ကို / Mac အတွက်အကြား file transfer
- FILE ကိုလုပ်ဆောင်ချက်များ:
, မိတ္တူ Move, အမည်ပြောင်း, delete, Zip, ဇီပ်, UnRAR, File and Folder ကိုဖန်တီးပါ။
သင်တို့ပတ်လည်အနီးဆုံးရရှိနိုင်ပါသည် devices များအလိုအလျှောက်ရှာဖွေရေးနှင့်အတူဘလူးတုသ်သို့မဟုတ် Wi-Fi ချိတ်ဆက်မှုမှတဆင့်အခြား devices ကို iPhone / iPad ကိုအတူဖိုင်တွေဝေမျှခြင်း။
- လွယ်ကူ Loading FILES:
iTunes ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ PC ကို / Mac ကို web browser ကိုဒါမှမဟုတ် USB သုံးပြီးဆွဲ / တစ်စက်ကိုအသုံးပြုပြီးလွှဲပြောင်းဖိုင်များကို။
စာသားမ Editor ကိုသင်သည်သင်၏ iOS အတွက်စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်သင်၏စာသားဖိုင်တွေသို့မဟုတ်အရင်းအမြစ် codes တွေကိုတည်းဖြတ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
- Import / FILES ဖန်ဆင်းခြင်း:
စာသားမဖိုင်များ, ပုံရိပ်ကိုဖမ်းယူနိုင်ခြင်း, ဗီဒီယိုအသံသွင်း, အသံအသံသွင်းခြင်းနှင့်သွင်းကုန်ရုပ်ပုံများကိုဖန်တီးနိုင်စွမ်း။ ဓာတ်ပုံစာကြည့်တိုက်၌တည်၏။
အဲဒါကထောက်ခံမှုနှင့်မျက်နှာ ID နဲ့ဖုန်း Drive ကိုသော့ဖွင့်ရန်သင့်လက်ဗွေကိုအသုံးပြုရန်စွမ်းရည်။
ဤလျှောက်လွှာကို iPhone နှင့် iPad များအတွက်တီထွင်နေသည်, သငျသညျကွိမျသာမဝယ်သင့်ပါတယ်။
Audio Player *** ***
- အားလုံး MP3 ဖိုင်တွေကစား။ သီချင်းစာရင်းအဖြစ် folder ထဲမှာဖိုင်တွေ။
- ပြန်လုပ်နှင့်သီချင်းများ shuffles ။
- multitasking ကနေအသံ Remote Control ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
- Viewer ကိုများနှင့်ပေါင်းစပ် equalizer controller ကို။
*** *** format VISUables
- အသံ (WAV, MP3, M4A, က CAF, AIF, AIFF, AAC)
- ပုံများ (JPG, PNG, GIF, BMP TIF, TIFF ICO)
- ရုပ်ရှင်များ (MP4, MPG, MPV, M4V)
- iWork (စာမျက်နှာများ, နံပါတ်များနှင့် Keynote)
- Microsoft Office (Word, Exc el နှင့် PowerPoint)
- RTF (Rich Text Format ကို)
- RTFD (ပါဝင်သောပုံရိပ်တွေနှင့်အတူ TextEdit)
- PDF ကိုစာရွက်စာတမ်းများ
- ရင်းမြစ် Code ကို
- က HTML Web ကိုစာမျက်နှာများ
- Web ကိုမော်ကွန်း
ဖုန်း Drive ကို Download: သိုလှောင်မှု Sync ကို File
လြယ္ကူအသုံးစရိတ်ခြေရာခံအဆိုပါအသုံးစရိတ်ဿုံအကောင့်များအကြားအားလုံးသင့်ရဲ့ငွေသားစီးဆင်းမှုအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သော iPhone နှင့် iPad များအတွက်အာဏာအရှိဆုံးနှင့်အများဆုံးအဆင်ပြေအဖြစ်ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲခြင်း, ဖြစ်နိုင်ပါသည်နေ့စဉ်ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ် ထောက်ပံ့။
လွယ်ကူသောအသုံးစရိတ်ယခုအီးမေးလ်အလိုအလျောက် backup လုပ်ထားဝန်ဆောင်မှုအခမဲ့ backup လုပ်ထား၏ထို့အပြင်ကျေးဇူးတင်ပိုမိုလုံခြုံသည်။
ဒီ feature နှင့်အတူသင်တို့သည်နောက်တဖန်အရေးကြီးသောဘဏ္ဍာရေးဒေတာဆုံးရှုံးစိုးရိမ်ရန်ရှိသည်။ ဒါမှမဟုတ်မတော်တဆပယ်ဖျက်ရေးသို့မဟုတ် device ကိုပြောင်းလဲမှုသည်။ သငျသညျကို install ဤလျှောက်လွှာနှင့်အတူမည်သည့်အတွက် iOS device ကိုပေါ်မှာ restore လုပ်လို့ရပါတယ်။
set ကောင်းစွာ space စာမျက်နှာနှင့်အတူလွယ်ကူသောအမူအရာနှင့်အတူလာကြ။ လွယ်ကူစာဖတ်ခြင်းနှင့်ဖတ်နိုင်တဲ့များအတွက်ကြီးမားသောဖောင့်။ ဒါဟာအစတစ်နေရာတည်းတွင်တစ်ဘဏ္ဍာရေးခြေရာခံခြင်းနှင့်ဥပဒေကြမ်းသတိပေးချက်များ၏အဆင်ပြေစေရန်ပေးထားပါတယ်။
@ အီးမေးလ်သို့မဟုတ် (ဝယ်ယူမှု၏လျှောက်လွှာအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါက) အသစ်သို့အလိုအလျောက် backup လုပ်ထားဝန်ဆောင်မှုကနေတစ်ဆင့်အခမဲ့ backup လုပ်ထားနှင့်သင်၏တန်ဖိုးရှိသောဘဏ္ဍာရေးဒေတာကိုဆုံးရှုံးဘယ်တော့မှမ
မိုဃ်းတိမ်၌ @ ပြီးပြည့်စုံသောနှင့်စပ်ရာမရှိသောထပ်တူအားလုံးသင်၏ငွေသွင်းငွေထုတ်ဒေတာ။ (app ကိုဝယ်ယူရရှိနိုင်)
ကုန်ကျစရိတ်ထပ်တလဲလဲ / ဝင်ငွေ @ Follow
တစ်ခုတည်း screen နဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့အစီရင်ခံစာများတွင် @ ACCOUNT ကို (S) မ MULTIPLE (S) မအနှစ်ချုပ်။
$ passcode LOCK ။
$ အသိပေးချက်များတစ်ခု option ကိုအဖြစ်အရောင်းအထပ်တလဲလဲဘို့ပြက္ခဒိန်မူလကဆက်ပြောသည်။ ဒီ option ကိုအသုံးပြုခြင်း, အချိန်ပေါ်တွင်သင်၏ဥပဒေကြမ်းဆပ်ဖို့ဘယ်တော့မှသေချာပါစေ။
$ ကြည့်ရန်ငွေတောင်းခံလွှာများ, ငွေပေးချေမှုနှင့်အမြင်နှင့်အတူအနာဂတ်ဝင်ငွေ "နောင်လာမည့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆောင်ရွက်မှုများ။ "
$ အရောင်းအ CSV အဖြစ်မေးလ်ပို့ပေးနှင့်လည်းသင့် Google Drive အကောင့်ပေါ်တင်ဆောင်ခြင်းကိုအားခွင့်ပြု
နှစ်ပေါင်းများစွာ $ Store ကိုဒေတာ
သမိုင်းအတွက် $ ကို Preview မှတ်ချက်များအရောင်းအရှာဖွေစူးစမ်းနေစဉ်။
ထိုကဲ့သို့သောစစ်ဆေး, ငွေစု, အကြွေးအဖြစ် $ အသုံးပြုမှု multiple accounts ။ စသည်တို့ကိုဒက်ဘစ်ကဒ်ငွေသားစီးဆင်းမှု, ပေါင်နှံအကောင့်များ
*** *** နှင့်ပတ်သက်သည့်အစီရင်ခံစာများ
$ အစွမ်းထက်အစီရင်ခံစာများ, အချိန်အစီရင်ခံစာများ
ဒိုးနတ်ဇယားအပေါ် $ အစီရင်ခံစာများကိုသင့်ငွေကိုတပ်ဦးတည်ရာ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့စိတ်ကူးပေးပါ။
$ အခွန်ရာသီအတွင်းအချိန်ကုန်သက်သာ, သင့်အကောင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောရန်သင့်ဒေတာအားလုံး၏တစ်ဦး csv file ကိုပို့ပါ။
$ ဒါ့အပြင်သင့် Google Drive အကောင့်ဖို့ csv ဖိုင်ကို download လုပ်ပါ
- အလိုအလျောက် Backup ကိုဝန်ဆောင်မှု -
အဆိုပါအလိုအလျှောက် backup လုပ်ထားဝန်ဆောင်မှုကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဘာမှလုပ်ပေးစရာမလိုဘဲ ckup ယူခွင့်ပြုတဲ့ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ app ကိုဝယ်ယူဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်လျှောက်လွှာများနှင့်အလိုအလျောက် backup လုပ်ထားသုံးပြီးဆက်လက်အားလုံးသင့်ရဲ့ဒေတာကိုအပတ်တိုင်းသို့မဟုတ်လစဉ်လတိုင်း, လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ သင့် application အမှားအားဖြင့်ဖျက်ပစ်နေသည်သို့မဟုတ်ဖုန်းကိုအစားထိုးသောအခါ, သင်သည်သင်၏ data တွေကို recover မရှိပြဿနာကိုရပါလိမ့်မယ်။
ဒီ feature တစ်လများအတွက်အခမဲ့အစမ်းအဖြစ်ပူဇော်သောနှင့်ကြေးပေးသွင်း၏ကုန်ကျစရိတ် $ 0,99 လအစမ်းကာလအပြီးတွင်ဖြစ်ပါသည်။ ။ ဖျက်သိမ်းသည်အထိဒါဟာအလိုအလြောကျလစဉ်လတိုင်းပြုပြင်ခြင်းရှိ၏။
ဒီ function တစ်လ၏ကနဦးစမ်းသပ်ကာလနှင့်အတူ, တစ်နှစ်လျှင် $ 7,99 ၏နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းကုန်ကျစရိတ်အဖြစ်ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ဖျက်သိမ်းသည်အထိကအလိုအလျောက်နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးသည်။
အဆိုပါငွေပေးချေဝယ်ယူ၏အတည်ပြုချက်ကိုမှာ iTunes ကိုအကောင့်ကနေ debited ပါလိမ့်မည်, ထိုအကောင့်ကာလမကုန်မီသက်တမ်းတိုး 24 နာရီတရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။
subscriptions အသုံးပြုသူကစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး Auto-သက်တမ်းတိုးဝယ်ယူပြီးနောက်အသုံးပြုသူရဲ့အကောင့်ဆက်တင်များကိုရယူနေဖြင့်ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုသူဤလျှောက်လွှာကိုမှစာရင်းသွင်းခြင်းဝယ်ယူသည့်အခါတစ်ဦးအခမဲ့အစမ်းကာလမဆိုအသုံးမပြုတဲ့အဘို့ကိုကမ်းလှမ်းသည်မှန်လျှင်, ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ ထုတ်ဝေ, သက်ဆိုင်လျှင်။
*** ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုသူများအ *** ဆိုသညျကားအဘယျသို့
@ 42 နှစ်ပေါင်းကတည်းကဘဏ္ဍာရေးစီမံအမျှဒီ app ကိုသင်လိုအပ်သမျှဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့သန့်ရှင်းအထိပါပဲ။ သင်ထက်ပိုပြီးမလိုအပ်စဉ်းစားလျှင်, သင်ကမရကြဘူး။
Excellent က @
ကျနော်တို့ကလပ်၏ဝင်ငွေနှင့်အသုံးစရိတ်ကိုခြေရာခံရန်ဤ app ကိုအသုံးပြုပါ။ သုံးပါများနှင့်ဖန်တီးအစီရင်ခံစာများကြောင့်လိုအပ်ပါတယ်အကြင်သူသည်အီးမေးလ်ပေးပို့ဖို့ဒါလွယ်ကူသော!
@ ပိုအသုံးပြုသူ Friendly
"ငါသည်နေ့တိုင်းဒီ app ကိုအသုံးပြုဖို့နဲ့ဝေးနေဖြင့်ငါ၏အ iPhone ပေါ်မှာတန်ဖိုးအရှိဆုံး App ဖြစ်ပါတယ်။ " - ယော Fredrick နယူးယော့
Times ကကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာထဲတဖြည်းဖြည်းခဲ့ကြပေမည်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ဥာဏ်ထဲမှာအစဉ်အမြဲရှိနေပါဦးမည်။
သူတို့အမှတ်တရများဖြစ်လာကြပါပြီသည်အထိအတော်များများအချိန်လေး Darling မရှိကြပေ။
သင်ဤခရီးစဉ်မှပြန်လာသည့်အခါ] တစ်နေ့မှာတော့, အထင်ရှားဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အမြဲတမ်းခရီးထွက်သောတဦးတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်။
layout, အရည်အသွေးမြင့်သရုပ်ဖော်ပုံများနှင့်ထုံးစံစာသားကိုသူတို့နှင့်အတူ marking အားဖြင့်အသက်တာ၏ဒီကဗျာပုံရိပ်တွေဖမ်းယူ, ရှယ်ယာဂန္ထဝင်ကိုးကား၏အကျင့်ကမ်းလှမ်း
ဖန်တီးမှုသရုပ်ဖော်ပုံများ Add နှင့်အစဉ်အမြဲအထူးယခုအချိန်တွင်မြတ်နိုး
social media FOR • Rating GROUP
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Instagram ကိုစာပမြေားစသည်တို့ကို Facebook အဘို့အဓာတ်ပုံများ, ပုံများ, ဂရပ်ဖစ် Pinterest ၏ YouTube ချန်နယ်, အဖုံးကိုဖန်တီးရန်ဒီဇိုင်းလူမှုမီဒီယာမော်ဒယ်များပြောင်းနည်း သင့်ရဲ့အမြင်အာရုံစတိုင် fit ကြောင်းအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်အရင်းအမြစ်များကိုမာကုကိုတသမတ်တည်းသင်၏လူမှုမီဒီယာ profile များကို။
4) Save မျှဝေ!
19659006] Layout နှင့်အတူ, လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်သင်၏ပရိုဖိုင်မြှင့်တင်ရန်ပါတီလူတွေကိုဖိတ်ခေါ်တစ်ခုသို့မဟုတ်စိတ်ခွန်အားနိုးကိုးကားဝေမျှဖို့စာသားနဲ့ဒီဇိုင်းရုပ်ပုံများထည့်သွင်းခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်, မွမ်းမံဖို့ဂရပ်ဖစ်များနှင့်ဖောင့်ကနေရွေးချယ်ပါ။
• Overlay ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ, filter များ, စာသားနှင့်အရောင်များ။
•မှော် filter များနှင့်အတူသင်၏ဓါတ်ပုံများတိုးတက်စေပါ။
•ကပညာရှင်ပီသစွာဒီဇိုင်းရေးဆွဲကြည့်ပေးကြဖို့ပုံရိပ်ကနေစာသား Hide ။
• MAGAZINE ရရှိနိုင်
အများဆုံးကြော့ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်များအတွက်မဂ္ဂဇင်းရလာဒ်ကဒိ, မဂ္ဂဇင်း, ပိုစတာသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာအလိုက်အယ်လ်ဘမ်နဲ့တူသင်၏ဓါတ်ပုံများဒီဇိုင်း။
အထူးအချိန်လေး၏တန်ဖိုးထားရန်လှပသော filter များထည့်ပါ။
• EFFECT ရုပ်ရှင်
မသိမသာစိတ်ခံစားမှုနဲ့အလင်းယိုစိမ့်အမျိုးမျိုးတို့ကိုဆောင်ခဲ့မည်အကြောင်း texture ။
တည်းဖြတ်ရေးကိရိယာများ, အရောင်အဝါများနှင့်ဆနျ့ကငျြဘ, က hue နှင့်ရွှဲ, vibrancy, အရောင်, ရိပ်နှင့်ပြတ်သား, ရှင်းလင်းပြတ်သား, ရှင်းလင်းပြတ်သား။
စက္ကန့်အတွင်းဝေမျှမယ်လူမှုရေးမီဒီယာ, SMS သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကနေတဆင့်မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူသင့်ရဲ့အဖိုးတန်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ။
ပိုပြီးလုပ်ချင်ပါသလား 1150 + အပိုဆောင်းပရီမီယံသရုပ်ဖော်ပုံများအထုပ်ကျော် Unlock ။
ဒေါင်းလုပ် layout ကို
Visual သင်္ချာ 4D
Visual သင်္ချာ 4D သင်သည်သင်၏သင်္ချာညီမျှခြင်းကြည့်ရှုဖြေရှင်းခွင့်ပြုထားတဲ့ဂရပ်ဂဏန်းတွက်စက်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သော 2D နှင့် 3D အတွက်မြင်ခြင်းနှင့်ကာတွန်းကားနိုင်သည့်ဝင်ရိုးစွန်းညီမျှခြင်း, အလင်းဆုံ, parametric နှင့်သွယ်ဝိုက်အဖြစ်ညီမျှခြင်းအမျိုးမျိုး, ထောက်ခံပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်း 2D နှင့် 3D အတွက်အားနည်းချက်ကိုလယ်ကွင်းဆွဲခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားနိုင်ပါတယ်။
- လမ်းဆုံနှင့်အတူ Cartesian လုပ်ဆောင်ချက်များကိုကြံစည်
- parametric ညီမျှခြင်းများနှင့် 2D 3D ဆွဲ
- ရှုပ်ထွေးသောကြံစည်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို (အစစ်အမှန်များနှင့်စိတ်ကူးယဉ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရုပ်ပြ)
- 2D နှင့် 3D အတွက်ကြံစည်မှုအားနည်းချက်ကိုလယ်ကွင်း
- 2D နှင့် 3D အတွက်ရေးဆွဲသွယ်ဝိုက်ညီမျှခြင်း
- ရေးဆွဲပုံမြေပုံများနှင့် 2D 3D
- vector နှင့်မက်တရစ်
- trigonometric လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်ခြဲ့ကားပွော
- သတ်မှတ်ထားသော Functions များခန်း
] - ယုတ္တိနှင့် binary အော်ပရေတာ
- စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာ (nPr, nCr, ကျပန်း .. )
- variable တွေကိုလှုပ်ရှားပုံများ
- ot နှင့်အတူခွဲဝေမှုက၎င်း၏ applications များ
အဆိုပါ application ကိုသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူသည်နှင့်ကျောင်းသားများနှင့်အင်ဂျင်နီယာများသင်္ချာညီမျှခြင်းမြင်ယောင်နှင့်ဖြေရှင်းနိုင်စေရန်ကူညီပေးသည်။
Download Visual သင်္ချာ 4D
- အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ display ကို၏ခင်းကျင်း
- အအမည်များ, နံပါတ်များ, အစက်နှင့်ဘားကြည့်ရှုကြသည်
- အ timer နေရာမှာ / အချိန်မှတ်နာရီ function ကို (extension ကို)
] ဒီ application ကိုစားပွဲတင်တင်းနစ်, ဘိလိယက်အပေါင်းတို့နှင့်ဂိမ်းတစ်ခုရလဒ်များကိုစားပွဲပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ scoreboard Download
ကြိုတင်မှာယူပါသစ်ကို Fitbit အပြန်အလှန်225 နှင့် $ ခံယူ - BGR
Umm ... သင်ကအလေးအနက်ထားသင့်ရဲ့အခမဲ့ပိုက်ဆံအမေဇုံကိုလက်ခံရရှိသည်မဟုတ်လော - BGR